Inona no Ataon'ny Maty?
Olana Prevention & Safety
Ny fanoloran-tena ataon'ny mpangalatra dia mampiseho ny toetra mampidi-doza indrindra
Tsy ny mpamono olona rehetra no mpamono olona, ​​fa ny ankamaroan'ireo mpamono olona dia mpangalatra. Ny famaritana ny antony mampiavaka ny mpihetraketraka mahery setra amin'ny mpanilikilika tsy misy herisetra dia sarotra. Ny antontan'isa momba ny antontan'isa dia voatery satria maro ireo tranga manomboka amin'ny fanoherana dia mihamitombo amin'ny heloka bevava marobe ary avy eo dia sokajiana ho toy izany. Ohatra, mpanao heloka bevava iray izay nanenjika ny tra-boina nandritra ny roa taona ary avy eo namono azy ireo dia matetika sokajiana ho mpamono olona.
Na dia mihatsara aza ny tatitra momba ny fanjakana eto amin'ity faritra ity, dia tsy fahampiana ny antontan'isa statistika amin'izao fotoana izao. Sarotra toy izany koa ny mahazo tatitra mafonja momba ny hamafin'ny famonoan'olona maro vokatry ny fitondran-tena mihenjana.
Ny olana hafa misy ny angon-drakitra amin'izao fotoana izao dia ny 50 isan-jaton'ny heloka bevava mihazakazaka no tsy navoakan'ireo niharam-boina. Marina indrindra izany raha ny momba ny fifandonana eo amin'ny mpiara-miasa akaiky na ny mpiloka iray fantatra amin'ilay niharam-boina. Ireo niharam-pahavoazana izay tsy mitatitra fa mitokona dia matetika mametraka ny anton'izany ho toy ny fahatahorana ny famaizana amin'ny mpanenjika na ny finoany fa tsy afaka manampy ny polisy.
Farany, ireo mpihetsiketsika izay voamariky ny rafitra fitsaràna heloka bevava dia nanampy tamin'ny tsy fahampian'ny data. Ny Biraon'ny Fandaharanasam-pitsarana momba ny Fitsarana momba ny Fitsarana dia nahitana fa ireo mpangalatra dia mbola manohy ny asan-jiolahy ary voaheloka noho ny fanorisorenana, ny fampitahorana, na ny lalàna mifandraika amin'izany raha tsy eo ambanin'ny lalàna manohitra ny fanenjehana.
Talohan'ny 1990, tsy nisy lalàna manohitra ny fanenjehana any Etazonia. Kalifornia no fanjakana voalohany nanamelohana ny fanenjehana taorian'ny tranga marobe nahitana trangan-javatra maro, anisan'izany ilay fanandramana namonoana an'i Theresa Saldana, mpilalao sarimihetsika tamin'ny 1988, tao amin'ny ESL, mpikaroka taloha sy mpanakorontana Richard Farley , ary famonoana an-keriny an'i Rebecca Schaeffer tamin'ny 1989 Robert John Bardo.
Ny fanjakana hafa dia nanara-maso akaiky ny fifidianana ary tamin'ny faran'ny taona 1993, ny firenena rehetra dia manana lalàna manohitra ny fanenjehana .
Ny fanindrahindrana dia voafaritry ny Ivontoerana Nasionaly momba ny Fitsarana ho "fitarihana ny fitondran-tena mifandraika amin'ny olona iray manokana izay miteraka imbetsaka (roa na mihoatra) fahaterahana ara-pahasalamana na ara-batana, fifandraisana tsy misy fanekena, na fandrahonana an-tsoratra, na voasoratra na misy mety Izany no mahatonga ny olona matahotra azy hahatahotra. " Na dia ekena ho toy ny heloka bevava manerana an'i Etazonia aza, dia miovaova be ny famaritana ny lalàna, ny fari-piainana, ny fanasokajiana ny heloka ary ny sazy.
Mpifoka-tena sy fifandraisana an-tapitrisany
Na dia vao haingana aza ny fanamelohana ny fanenjehana, dia tsy fihetsika vaovao ny fitakiana. Na dia betsaka aza ny fikarohana natao ho an'ireo tra-boina, dia voafetra ihany ny fikarohana. Ny antony mahatonga ny olona ho mpangalatra dia sarotra sy sarotra. Na izany aza, ny fikarohana ara-pitsaboana vao haingana dia nanampy hahatakatra ny fomba amam- panao samihafa fihetsika . Ity fikarohana ity dia nanampy tamin'ny fanondroana ireo mpanenjika ireo izay mety ho loza mitatao sy mampidi-doza indrindra amin'ny fampijaliana na famonoana ireo niharan-doza. Ny fifandraisana misy eo amin'ny mpanenjika sy ny niharam-boina dia manaporofo fa tena ilaina ny fahatakarana ny lanjan'ny loza ateraky ny tra-boina.
Ny fikarohana ara-pivavahana dia nandrava ny fifandraisana tamin'ny vondrona telo.
Ireo mpiara-miasa akaiky taloha. Anisan'izany ny lahy sy vavy ary ny mpiara-monina, ary ny sipany sy ny sipany.
Mpinamana, fianakaviana, ary olom-pantatra,
Mpitsoa-ponenana tsy miankina iray misy olom-panjakana.
(jereo Mohandie, Meloy, Green-McGowan, & Williams (2006) Journal of Forensic Sciences 51, 147-155).
Ny vondrona mpiara-miombon'antoka akaiky indrindra no sehatra goavana indrindra momba ny fitsaboana. Io ihany koa no vondron'olona ahitana ny loza mety hitranga ho an'ireo mpanenjika mba ho lasa herisetra. Fikarohana maromaro no namaritra fifamatorana manan-danja eo amin'ny fanenjehana akaiky ny mpiara-miasa sy ny fametavetana ara-nofo .
Tamin'ny taona 1993, ny manam-pahaizana matihanina Paul Mullen, izay talen-tsekoly sy lehiben'ny sakaizan'ny Forensicare ao Victoria, Australie, dia nanao fanadihadiana be dia be momba ny fitondran-tena.
Ny fikarohana dia natao hanampiana ny marary sy ny sokajy mpilatsaka an-tsokosoko, ary tafiditra ao anatin'izany ireo mpanafika mahazatra izay mahatonga ny fitondran-tenany ho lasa tsy misy dikany. Ankoatr'izany, ireo drafitra ireo dia ahitana drafitra fitsaboana vonona.
Moul sy ny ekipany mpikaroka dia nahitana karazam-panafika dimy:
Ny fanilihana an-tsokosoko dia hita amin'ny tranga izay tsy misy fifandraisany amin'ny fifandraisana akaiky, matetika amin'ny namana mpifankatia , saingy mety ho tafiditra ao anatin'izany ny olona ao amin'ny fianakaviana, ny namana ary ny mpiara-miasa. Ny faniriana mitady valifaty dia lasa fomba hafa raha toa ka mihena ny fanantenana ny mpanohitra amin'ny fampihavanana amin'ny saziny. Ny mpiloka dia hampiasa amin'ny fomba mihetsika toy ny mpisolo toerana ho solon'ny fifandraisana very. Ny fandriampahalemana dia manome fahafahana hifandray hatrany amin'ilay niharam-boina. Izy io ihany koa dia ahafahan'ilay mpihetraketraka hahatsapa misimisy kokoa momba ilay niharam-boina ary manome fomba iray hampidirana ny fahamendrehan'ny tena mpikomy.
Ireo mpangalatra mpangalatra dia miorina amin'ny fahatsapana ho manirery sy ny marary saina. Diso izy ireo ary matetika mino fa mifankatia amin'ny olon-tsy fantatra iray manontolo izy ireo ary ny fihetseham-po dia alefa (fametavetana erotomanika). Ireo mpitsoa-ponenana akaiky indrindra amin'ny ankapobeny dia amin'ny ankapobeny ara-tsosialy sy malemy saina. Haka sary an-tsaina ny zavatra inoan'izy ireo fa fihetsika ara-dalàna ho an'ny mpivady amin'ny fitiavana. Hividy voninkazo "ny tena fitiavana" izy ireo, handefa fanomezana amam-bika, ary hanoratra azy ireo amina taratasy fitiavana be loatra. Ireo mpitsoa-ponenana akaiky dia matetika tsy mahatsapa fa ny tsy fisainany dia tsy ilaina noho ny finoany fa mizara fifamatorana manokana amin'ny sazin'izy ireo.
Ireo mpihetsiketsika tsy mpankasitraka sy mpikatroka mafàna fo dia mizara sasantsasany amin'ny toetoetrany amin'ny maha-izy azy ireo amin'ny maha-sahirana ara-tsosialy sy ara-tsaina azy ireo ary vahiny tsy fantany. Tsy toy ny mpangalatra fiaraha-miombon'antoka, ireo mpangalatra tsy afa-po dia tsy mikatsaka fifandraisana lava maharitra, fa ho an'ny fotoana fohy toy ny daty na ny fihaonana ara-piraisana. Miaiky izy ireo rehefa mandà azy ireo ireo niharan'ny herisetra, kanefa manosika ny ezak'izy ireo mba handresy azy ireo. Amin'izao dingana izao, dia miharatsy sy mahatsiravina ny fomba fanaon'izy ireo ny niharam-boina. Ohatra, ny fanamarihan'ny fitiavana ao anatin'ity dingana ity dia mety hiteny hoe "Izaho no mijery anao" fa tsy "tiako ianao."
Ireo mpangalatra mafimafy dia mitady valifaty, fa tsy fifandraisana, miaraka amin'ireo niharam-boina. Matetika izy ireo no mahatsapa fa nalaim-panahy, nanala baraka, na nampijaly izy ireo. Mihevitra ny tenany ho ilay niharam-boina izy ireo fa tsy ny olona miala sasatra. Araka ny voalazan'i Mullen, mpangalatra am-pilaminana ireo mijaly noho ny paranoia ary matetika izy ireo no nanana ray iza no nitantana tamim-pitandremana. Hifaly izy ireo amin'ny fotoana iainany eo amin'ny fiainany rehefa tratran'ny fahoriana mafy izy ireo. Manao fihetsiketsehana izy ireo amin'izao fotoana izao ny fihetseham-po ratsy nateraky ny traikefa taloha. Izy ireo dia mametraka andraikitra amin'ireo traikefa mampalahelo niainan'izy ireo tamin'ny lasa izay niharam-pahavoazana teo amin'izao fotoana izao.
Tahaka ilay mpihetsiketsika feno alahelo, tsy mitady fifandraisana amin'ny olona niharan'ny herisetra ilay mpihaza voromailala, fa kosa mahafa-po azy amin'ny fahatsapana hery sy fanaraha-maso ny traikefa azon'izy ireo.
Ny fanadihadiana dia manaporofo fa ilay mpihaza voromailala no karazana mpanakorontana mahery indrindra, satria matetika izy ireo no mahatsapa fa manimba ny traikefany, matetika amin'ny fanao ara-pananahana. Mahafinaritra azy ireo ny mamela ny voany hahalala fa afaka manisy ratsy azy ireo amin'ny fotoana rehetra. Matetika izy ireo dia manangona ny mombamomba azy manokana momba ny tra-boina ary hampiditra ireo mpikambana ao amin'ny fianakaviany na ny fifandraisana matihanina amin'ny fitondran-tena manafintohina, matetika amin'ny fomba manala baraka.
Areti-mifindra sy aretina
Tsy ny mpanakorontana rehetra no manana aretina ara-tsaina, fa tsy mahalana. Farafahakeliny 50 isan-jaton'ny mpitsoka-ponenana mijaly amin'ny aretina ara-tsaina dia matetika no manana anjara biriky amin'ny fitsarana ara-dalàna na ny tolotra ara-pahasalamana. Izy ireo dia iharan'ny aretina toy ny aretina, ny aretina, ny fahaketrahana, ary ny fanararaotana tafahoatra no mahazatra indrindra.
Ny fikarohana ataon'i Mullen dia manoro hevitra fa ny ankamaroan'ny mpangalatra dia tsy tokony ho raisina ho mpanao heloka bevava fa kosa olona izay mijaly noho ny aretina ara-tsaina ary mila fanampiana matihanina.
Ireo karazana herisetra an-trano samy hafa
Lalàna mifehy ny fitondrana
Fahafatesan-tsaina ao amin'ny toeram-piasana
Ahoana no hamantarana ny vola sandoka?
Ny Facts Momba ny Fizahan-tany momba ny Fizahan-tany
Cyberstalking and Internet Harassment - Avy eo ary ankehitriny
Raha tezitra ianao
Inona no mihazakazaka?
Fiarovana PIN PINOSANA Vahaolana fotsiny
Alumni Exponents and Power of Worksheets 10
Fantaro ny mety ho vokatr'ireo zanaka vavin'ny zana-badiny
Toromarika amin'ny famoahana sy fametrahana Visual C # 2008 Express Edition
Ahoana ny fikaonan'ny interfaces audio recording
Fiarahabana am-boninahitra mba hanao Card Birthday Special
Tokony ho fantatra ve ny mandehandeha manidina?
Fomba fanodinana ny ala - Fandrosoana sy vava
Ny Tantaran'ny Rubik's Cube
Profile sy Biography of John the Apostle
Ady An-trano Amerikanina: Battle of Gettysburg
Tsara indrindra ny namanao
Strategic Rhetorical Strategies for Speakers and Writers Contemporary
Mpahay Politika Manana Hevitrao Tsy Nahalala
Sary mpahay siansa malaza - anarana iray
Manao ahoana ny halehiben'ireo tsy manan-kialofana diplomatika?
Ny Fastest Mile Times: Ny rakitsoratra maneran-tany
Betty Friedan Teny nalaina: Mpanorina ny vehivavy
Ireo Colleges amin'ny dorms tsara indrindra
Famaritana ny anarana sy ny orinasa BROWN